ကူညီပြီးဖြေရှင်းပေးကြပါ... — MYSTERY ZILLION
ကျတော်စက်မှာ IE လည်းဖွင့်မထားပဲ windows task manager ကို ကြည့်ရင် exploer.exe ဆိုပြီးတွေ့တယ်..နောက်တစ်ခု dwwin.exe ရော..တွေ့တယ်..exploer.exe ကို end process ကိုလုပ်လိုက်ရင် စက်က ဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူး..dwwin.exe ကတက်လာရင်တော့စက်က အရမ်းကြာပြီး hangသွားပေးမယ်ပိတ်ရင်တော့ရတယ်....အဲ့ဒါဘာလို့လဲ သိတဲ့လူများပြောပြပေးပါ..စက်မှာ..kaspersky 2010 လည်း တင်ထားတာပဲ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတာပြောပြပေးပါ..network ကလည်း အခုတလောအရမ်းနှေးနေတယ်..ဒီ problemကြောင့်လားဆိုတာသိချင်ပါတယ်..ပြောပြပေးကြပါ...
Mingalar1951 wrote: »
အစ်ကိုရေ....။task manager မှာ explore ပေါ်တာကာ..window စတက်ရင် အလုပ်လုပ်တဲ့ဟာပါ။ သူကို end task လုပ်ရင် စက်က ဘာမှ မလုပ်တော့ပါဘူး။ အစ်ကိုက..IE
ဖွင့်ထားရင် task manager မှာ iexplore.exe လိုပေါ်ပါလိမ့်မယ်။ ပြီးရင် အစ်ကိုစက် virus တချက်စစ်ပေးပါ...။
စစ်ဆေးပြီးပြီ..ဒါပေမဲ့ virus ကို...ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲ..စက်ကလေးနေတုန်းပဲ Hang သွားတယ်တစ်ခါတစ်ခါ..ကူညီပေးပါ..
အဲဒီ exploer.exe ကို ပိတ်လို ့မရဘူး.. သူ က Window နဲ ့ပဲ ဆိုင် တာ....
dwwin.exe ကဖရန် ့တင်ထားတဲ့Software တစ်ခုခု ဖြစ်လိမ် ့မယ် ထင်တယ်....အမြဲတမ်း Tast Manager ကနေ ပိတ်နေဖို့အဆင်မပြေဖူးဆိုရင်တော့Start menu ကနေမလိုတာတွေကို သွားပိတ်လို ့ရပါတယ်။
Start menu ပိတ်ဖို့အတွက်:67:
Start>Run> msconfig ရိုက်ထည် ့ပြီး အဲဒီကနေမှ Start menu ကို ရွေးပါ
အဲဒီမှာ မလိုတဲ့exe ဖိုင်တွေ ပိတ်ထားလို့ရပါတယ်....။ ပြီးရင် စက် ကို Restart ချလိုက်ပါ.....
ဒါဆိုရင် ကွန်ပျူတာ ဖွင် ့လိုက်တိုင်းမှာ မလိုတဲ့exe file တွေတက်မလာတော့ဘူး:103:
dwwin.exe အကြောင်းကတော့ ဒီလိုလေးတွေ့မိတယ်ဗျ။
dwwin.exe isapart of the Microsoft Doctor Watson error reporting tool which comes packaged with some Microsoft products. This program is important for the stable and secure running of your computer and should not be terminated.
October 2009 edited October 2009 Registered Users, Moderators
အစ်ကိုမြင်ရတဲ့ exploer.exe ဆိုတာ virus ဖြစ်ဖို့များပါတယ်။ ကျွန်တော်တို့ windows တတ်ဖို့ run တာက explorer.exe ပါ ထင်ယောင်ထင်မှားဖြစ်အောင် နာမည်တူလုပ်ထားတဲ့ဗိုင်းရပ်စ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ cmd မှာ C:\_autorun.inf လို့ရိုက်ကြည့်ပါလားအစ်ကို notepad နဲ့တတ်လာရင် အဲဒီမှာရေးထားတာတွေ့ရင် search ပြီး လိုက်သတ်ပါ။ မသတ်ခင် taskmanager မှာ အစ်ကိုတွေ့တဲ့ exploer.exe ကိုအရင်ပိတ်ထားဖို့လိုပါမယ်။ အကြမ်းဖျင်းတော့ရှင်းပြထားတယ်အစ်ကိုရေ အဆင်ပြေပါစေ။
C:\_autorun.inf လို့ရိုက်တာလည်း မရပါဘူး window cannot find တဲ့ ဘယ်လိုဆက်လုပ်ရမလဲဆိုတာ ကူညီကြပါအုန်း.
ကျွန်တော့်အ ထင်တော့ kaspersky 2010 ကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါတယ် ဖြုတ်ပြီး kaspersky7ကိုပဲသုံးစေချင်ပါ တယ် ပြဿနာများ လို့ အခု အမေရိကန်က တောင် ပယ်ထားတဲ့အဆင့်..ဖြစ်နေလို့ပါ
သူက system 32 က ကောင်တွေကိုပါ ဖြတ်ပစ်ပြီး စက်ကို hang သွားစေတဲ့အထိဖြစ်နိုင်လို့ပါ...
ကွန်တောှလည်းကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးပါသည်။ Ye Htet ပြောသလိုပဲ dwwin.exe သည် virus နှင့် မသက်ဆိုင်ပါ၊ error reporting tools ဖြစ်၍ microsoft ၏ product များကောင်းစွာ အလုပ်လုပ်ရန် စစ်ဆေး၍ report ပြန်ပေးခြင်းဖြစ်ပါသည်။ virus ကြောင့် windows, office နှင့် အခြား product များ ချိတ်ဆက်မှု ပျက်စီးခြင်း၊ program အချို့ unistall လုပ်သောခါ ကျန်ရှိနေသော အစိတ်အပိုင်းများ ကြောင့် error တက်ခြင်း၊ file corruption ကြောင့် system file များပျက်စီးခြင်း (FAT 32 တွင်အဖြစ်များပါသည်) တစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်နိုင်ပါသည်။ error တက်သောအခါ dwwin.exe ကအလုပ်လုပ်ပါသည်(CPU အပြည့်နီးပါး ယူတတ်ပါသည်)။ ပြင်ဆင်နိုင်သည်မှာ windows နှင့် အခြား product များ repair လုပ်ပါ။ မရပါက uninstaller software များဖြင့် ရှင်းလင်း၍ reinstall လုပ်ပါ။ repair မလုပ်ခင် check disk လုပ်သင့်ပါသည်။
task manager တွင်ရှိသော explorer.exe ကို anvir task free, process explorer စသည့် program များကို သုံး၍စစ်ကြည့်ပါ။ C:\_WINDOWS\_explorer.exe သည် explorer ၏ path အမှန်ဖြစ်သည်။